ज्यानको ख´तरा भएपछी सदिच्छा रुदै आइन लाइभ। हेर्नुहोस भिडियो – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत्र ०८, २०७७ समय: २२:२५:५४
भिडियो अन्तिममा छ हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका–५ का ३१ वर्षीय प्रविण बाँस्तोलको गत पुस ५ गते भएको मृ,त्यु प्रकरणमा मृ,त्यु वा ह,त्याको कारण र सं’लग्न व्यक्तिसम्म प्रहरी नपुग्दै सामसुम हुनै लागेको थियो । तर जब मृ,तककी बहिनी दूर्गा बाँस्तोला ‘सदीक्षा’ले जनस्तरबाटै घ’टनाको छा’बिन थालिन्, शं’कास्पदहरू न्यायको कठघरासम्म पुगेका छन् ।
राज्यबाट अख्तियार प्राप्त प्रहरीले गर्न नसकेको काम पी’डित परिवारकी एक युवतीले गर्न कसरी सम्भव भयो ? शं’कास्पद आ’रोपीसम्म पुग्न सदीक्षाले प्रहरीलाई कसरी बाध्य पारिन् ? यसका पछाडि सदीक्षाले धेरै संघर्ष गर्नुपरेको छ । मृ,तककी बहिनी सदीक्षाले दाजुको न्या’यका लागि ईलाका प्रहरी कार्यालयमा गरेको सं’र्घष र देखाएको साहस पछिल्लो समयमा उदाहरणीय बनेको छ ।
२ वर्षदेखि अमेरिकाको टेक्सासस्थित ‘डेल्टा क्वालिफ्लाइट एभिएसन एकेडेमीमा पाइलट पढ्दै गरेकी सदीक्षाले दाजुको मृ,त्यु भएको खबर परिवारबाट पाइन। दाजुको मृ,त्युको खबरले निःशब्द बनेकी सदीक्षाले घरमा भनिन्– मैले नआउँदासम्म दाजुको अ’न्तिम दाह सं’कार नगर्नू । ‘२ वर्षदेखि मेरो दाजुलाई प्रत्यक्ष देखेकी थिइनँ, मलाई अन्तिम पटक दाजुको अनुहार हेर्नु थियो, त्यसैले म नआउञ्जेल दा’ह सं’स्कार गर्न पाइँदैन भनेकी थिएँ’ सदीक्षाले भनिन्, ‘घ’टनाको दिन (पुस ५ गते) थाहा पाएँ तर टिकट भनेको समय मा नपाएकाले ८ गते राति साढे १२ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थलमा ल्याण्ड भएकी थिएँ ।’
रातिको समयमा आन्तरिक उडान नभएका कारणले उनी गाडी रिजर्भ गरेर पुस ९ गते बिहान ११ बजे उर्लाबारी घरमा पुगिन् । उनले दाजु प्रविणको अ’नुहार हेरेपछि दा’ह सं’स्कार गरियो । १३ दिनको का’ज क्रि’या भयो । यतिबेलासम्म उनलाई लागेको थियो, प्रहरीले घ’टनाको अनुसन्धान गरिरहेको होला । ‘परिवारले जा’हेरी नदिए पनि प्रहरी प्रशासनले आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेको छ जस्तो लागेको थियो ।
यसैमा १ महिना बित्न लागे पनि घटनाको वास्तविकताबारे केही अ’त्तोपत्तो नभएपछि उनी प्रहरीमा बुझ्न गइन् ।प्रहरीले त्यतिबेलासम्म घरधनी, प्रविणका साथीभाइलाई अ’भ’द्र व्यवहारको मु’द्दामा प’क्रा उ गरेर ६ दिनमा छाडिसकेको थियो। मृ,त्यु/ह,त्या घ’टनाको अनुसन्धानमा कानूनी रूपमा कोही पनि प्रहरी हिरा’सतमा थिएन । प्रहरीले घ’टनालाई सामसु’म पारिसकेको थियो । प्रहरीको लापर’वाही र निष्क्रि’यता देखेर उनले संघर्ष गर्ने निधो गरिन् ।
प्रहरी अनुसन्धान र गतिविधि माथि प्रश्न उठाउँदै जनस्तरबाट छानबिन गर्न थालिन् । दाजुले न्या’य पाउनु पर्ने र प्रहरी ग’ल्ती गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल ‘फेसबूक लाइभ’ मार्फत उनले आवाज उठाइन् । लाइभ भिडियो देखेका स्थानीयले अनु’सन्धान गर्न प्रहरी माथि दबा’ब पर्ने गरी आन्दो’ल’न गरेर सहयोग गरे । प्रहरी फेरि अनुसन्धान गर्न राजी भएपछि सदीक्षाले शंका’स्पद व्यक्तिका नाममा कि’टा’नी जा’हेरी दिइन् ।
पो’स्ट मार्ट’म रिपोर्टमा उल्लेख भएको कुरा र प्रहरीले भनेको कुरामा शं’का लागेपछि उनले सम्बन्धित डाक्टरलाई रिपोर्ट देखाइन्। त्यसबाट सदीक्षाले नयाँ तथ्य थाहा पाइन्, जुन प्रहरीले लुकाइरहेको थियो । प्रहरीले म’दि’रा सेव’नका कारण मृ,त्यु भएको बताइ रहेको थियो । डाक्टरका अनुसार मेडिकल रिपोर्टमा ‘भाइलेन्ट एक्सप्रेसिया’ देखाएको र घाँ’टीमा २० सेन्टिमिटरको नि’ल डा’म भएको उल्लेख छ ।
रिपोर्टमा मृ,तकको छातीमा लामो थिचा’इले गर्दा मृ,त्यु भएको भन्ने पनि लेखिएको पाएपछि सदीक्षाले त्यो कुरालाई फेसबूक मार्फतनै बाहिर ल्याइन् । यसपछि प्रहरी नै शं’काको घेरामा पर्‍यो । मृ,तककी बहिनी सदीक्षाको निरन्तरको खबरदा’रीपछि प्रहरीले प्रविण को ह,त्यामा सं’लग्न भएको आ’रोपमा मेघर दर्जी, कुमार राई, रमेश गिरी र सुदीप परियारलाई प’क्रा उ गर्‍यो ।
प’क्रा उ परेका मेघर दर्जीलाई जिल्ला अदालतले पुर्प’क्षका लागि थु’नामा पठाएको छ भने उनका साथी कुमार राईलाई ३ लाख र घरधनी समेत रहेका रमेश गिरीलाई १ लाख रुपैयाँ ध’रौटीमा छाडेको छ। सदीक्षाले बल्ल राहतको श्वास फेरेकी छन। ‘अनुसन्धान मा कमजोरी गर्ने इन्सपेक्टर कार’वाहीको सिफारिसको लागि जिल्लामा तानिएका छन् । अन्यलाई पनि अदालतमा ’भ्याइएको छ,’ सदीक्षाले भनिन्, ‘अब अदालतले न्या’य दिलाउला ।’ परिवारमा बुवाआमा, २ दिदी, सदीक्षा र प्रविण थिए ।
दुवै दिदीको बिहे भइसकेको उनले बताइन् । अहिले बुवाआमाको हेरचाह सदीक्षाले नै गर्छिन् । ‘मेरो दाजु स्व’र्गे भएपछि मैले नै बुवाआमाको हेरचाह गर्छु,’ सदीक्षाले भनिन् ।अमेरिका जानुअघि उनले काठमाडौंमा एयर होस्टेजको काम गर्थिन् । पहिला सौर्य एयर लाइन्समा काम गरिन्, त्यसपछि श्री एयरलाइन्समा प्रमुख एयर हो’स्टेजको रूपमा काम गरेकी थिइन् । उनले पाइटलको ल’इसेन्स पाउनको लागि अमेरिकामा ४–५ महिना पढ्न बाँकी छ, त्यो पूरा गर्न जाँदैछिन् उनी । त्यसपछि नेपालमै फ’र्केर काम गर्ने उनको योजना छ ।
प्रहरीको ग’ल्ती औल्याउने सदीक्षाको त्यो कडी: सदीक्षाले शुरूदेखि नै दाजुको मृ,त्यु नभएर योजनाबद्ध रूपमा मा,रिएको हुन सक्ने भनेर प्रहरीलाई घच्घ’च्याइ रहिन। उनले उर्लाबारी ईलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक (इन्स पेक्टर) उद्धव पोखरेललाई मृ,त्यु नभएर ह,त्या जस्तो भएकाले राम्ररी अनुसन्धान गरिदिन आग्रह गरिरहिन् ।
दाजुको अवस्था कस्तो थियो ? कहाँ मृ,त फे’ला परेको थियो ? क–कसको घरमा गएको थियो ? के कारणले मृ,त्यु भएको थियो ? यी प्रश्नको जवाफ प्रहरीले मृ,तक परिवारलाई दिएको थिएन । सदीक्षाले यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास गरि रहिन् । ‘घटना भए पछि अनुसन्धान गर्दा घ’टनासँग जो’डिएका मानिसहरूलाई शं’काको घेरामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्थ्यो, त्यो देखिएन,’ सदीक्षाले भनिन्, ‘त्यसैले मैले प्रहरीलाई राम्रोसँग घच्घ’च्याउन थालें ।’
अनुसन्धानका लागि घच्घ’च्याइ रहँदा इन्स्पेक्टर उद्वव पोखरेलले सदीक्षालाई सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्रतिवेदन
६४५ पटक हेरिएको